Muxuu yahay, sida loo unkay iyo halka uu ka dhacayo DANA | Saadaasha Shabakadda
Maqaal hore waxaan ku lafaguri jirnay wuxuu yahay iyo cawaaqibka uu leeyahay dhibicda qabow. Waxaan u aragnay gabagabo in fikradda qabow hoos u dhaca ay si khaldan u adeegsatay bayaanno khaldan oo ay xambaarsan tahay. Waana in fikradda hoos u dhaca qabow ay tahay farsamo xumo niyad jab ku ah heerar sare. Waxaa si fiican loogu yaqaanaa Dana. Tani waa dhacdo saadaasha hawada oo dhacda sanad kasta waxaana lagu gartaa xaalado cimilo xumo oo sababa waxyeelo badan.
Maqaalkani waxaad ku baran doontaa wax walba oo ku saabsan DANA. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato? Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska.
1 Waa maxay DANA
2 Sida loo soo saaro
3 Halka iyo goorta la soo saaro DANA
4 Cawaaqibta DANA
Waa maxay DANA
Sida ku xusan maqaalka ku saabsan hoos u dhaca qabowga, waa ifafaale si buuxda u weeraraya dhinaca badda Mediterranean ee Jasiiradda Iberia. Waxay u dhacdaa sida magaceedaba ka muuqata waa niyad-jabka heerarka sare ku jira. Hawada ayaa ku socota isbadal baaxad leh oo ku saabsan heerarka cadaadiska Hawada waxayna taasi sameysaa roobab mahiigaan ah oo xilliyadan la arki karo. Fikradda hoos u dhaca qabow waxaa loola jeedaa oo keliya cawaaqibyada ka dhasha niyad-jabkaan ku go'doonsan dhererka waxaana loo istcimaalaa si wada jir ah in loogu dhawaaqo inaan la imaan doonno dhacdooyin khatar roob leh.
Si kastaba ha noqotee, khubaro ku takhasusay cilmiga, iyo sidaas darteed kuwa garanaya sida ay ifafaalaha u shaqeeyaan, waxay doorteen magaca DANA si ay u sharxaan habka uu asal ahaan uga soo jeedo.
Sida loo soo saaro
Si ay DANA u sameyso waa inay jirtaa noocyo kala duwan oo xaalado ah oo u badan xilligan oo kale sanadka. Sababtaas awgeed, waa wax iska caadi ah, maalmaha ku dhow xagaaga San Martín waxaa jira maalmo ay dhacdo roobab mahiigaan ah oo masiibooyin badani dhacaan.
Waxa ugu horreeya ee loo baahan yahay samaynta ifafaaladdan saadaasha hawada waa in hawada qulqulka diyaaradda ayaa wareegaya si ay u sameysato lambarro gadaal ah. Goor dambe, fidinta qulqulka hawada ee koonfurta waxaa sameysmaya sababa hoos u dhac ku yimaada cadaadiska Hawada. Qaybta go'doonsan ee cadaadiska hoose waxay umuuqataa udhaqaaqida hawada ee dhanka koonfurta.
Sida aan kusoo sheegnay qormooyin kale sida kan cadaadiska Hawada, Aag cadaadis hooseeya ayaa muujinaya jihada ay dabayshu u socoto. Hawada hawadu waxay u socotaa saacad u socodka dhinaca koonfureed iyo dhinaca woqooyi ee dhinaca woqooyi. Waa wareegga hawada ee keena abuuritaanka daruuraha nooca nbusbus soo saarista duufaanno xoog leh.
DANA waxay gebi ahaanba ka go'doonsan tahay geestii ay saarneyd waxayna bilaabaysaa inay u aado koonfurta. Dhinaca kale, marar badan ayay dhacdaa taas cirifka cadaadiska sare ee woqooyiga DANA. Kuwani waa xaaladaha cimilada wanaagsan ee lagu garto cadaadiska hawo sare. Kuwa aan aqoon, cirifku waa aag jawiga ka mid ah halkaasoo cadaadisku ka sarreeyo kuwa kale ee ku hareeraysan.
Halka iyo goorta la soo saaro DANA
Badanaa, DANA waxay dhacdaa xilliga dayrta. Tan waxaa u sabab ah hawada weli ku wareegeysa aagagga badda ee laga soo bilaabo kuleylka xagaaga. Gobolka ugu nugul dhibaatada noocan ah waa Mediterranean. Waxay ku jirtaa jasiiradeena halkaasoo iska horimaadka cirifka ee dhaca uu ka sii socdo dhammaan Galbeedka Yurub iyo hawo diiran oo qoyan oo ka timaadda Badda Dhexe.
Laga soo bilaabo durdurrada diyaaradaha, kuwani waa cufnaanta hawo qabow ee ka xoog badan dabaqadda (halkaas oo heerkulkeedu aad u hooseeyo), waxay ku faafaan kumanaan kiilomitir si ay u yeeshaan baaxad weyn oo boqollaal kilomitir ah. Furitaankan ballaaran wuxuu saameeyaa dhammaan Peninsuka oo ku dhammaata roobab mahiigaan ah oo leh awood sare ku dhowaad dhammaan meelaha isku mar.
Dhaqdhaqaaqa ugu caansan ee DANA ayaa leh waa wareegga jihada galbeed-bari, inkasta oo mararka qaar ay qaadan karto jihada woqooyi-koonfureed, taas oo keenaysa in hawadu foorarsato ilaa ay ka jabto. Markii barakicintan cufnaanta cirka ay dhacdo, midkood ayaa weli madax-bannaan laakiin aad u qabow oo go'doon ah. Tani waa cufnaanta hawada ee sababi doonta roobabkan culus ee wata dabeylaha iyo duufaanka, oo aan si isku mid ah ugu yeerno dhibic qabow.
Saamaynta dhacdadan saadaasha hawadu aad bay u sii daran tahay farqiga u dhexeeya heer kulka u dhexeeya cufnaanta qabow ee hawada ee weli go'doonsan iyo heerkulka hawada ee ka timaadda badda. Haddii baddu diirran tahay, cufnaanta hawadu si dhakhso leh ayay uumi doontaa oo wey urursan doontaa marka ay gaarto cufnaanta qabow, waxay abuureysaa daruuro waawayn waxayna dhalinaysaa roob aad u badan
Dhibaatada roobabka noocan ahi ay dhaliyaan ayaa ah in magaalooyinka ay ku dhacdo aan loo diyaarin xadigaas oo biyo ah muddo gaaban gudaheed. Waana in bullaacadaha iyo shabakadda biyo-qaybinta ay gaaraan xadka ay leeyihiin oo daadadka caanka ah ay dhacaan.
Saamaynta roobabkani ku yeesheen magaalo gaar ah waxaa u sabab ah qorshaynta iyo qorshaynta goobta. Magaalo kastaa waxay leedahay PGOU (Qorshaynta Magaalada iyo Maareynta Qorsheheeda) oo ka kooban dhammaan dhinacyada lagama maarmaanka u ah si looga hortago waxyeelada ka dhalan karta roobabka ugu culus. Jawiga astaamihiisana lagu daro PGOU ee aag. Haddii, tusaale ahaan, magaalo ay cawaaqib xun kala kulmaan DANA sannad walba, waxa ugu caansan waa in la isku dayo in la abuuro ama abaabulo kaabayaasha lagama maarmaanka u ah si loo yareeyo khasaaraha.
Daadadku waxay sababaan waxyeelo ballaaran oo maadiga ah iyo nolosha qaar ayaa sanad walba la sheegaa dalkeena. Badanaa dadka ku xaniban gawaarida, ku haftay ama qaaday daadadka iyo / ama qulqulka webiga.
Sidaad u aragto, hoos u dhaca qabow ma aha wax ka badan cawaaqibka ama magaca wadaagga ah ee loo bixiyo murugadaas go'doonsan ee ku dhacda joogga sare ee loo yaqaan DANA.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » DANA, Niyad-jabka Gooni Goon ee Heerarka Sare
Sidee Dhulka loo abuuray